रेखा र शिल्पालाई लिएर छविले फिल्म बनाउने ! « Ramailo छ
रेखा र शिल्पालाई लिएर छविले फिल्म बनाउने !
आर्यन सिग्देलसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै ‘रुद्रप्रिया’ बनाएकी रेखा थापाले यसै फिल्मको प्रिमियरमा अर्को सम्बन्ध सुधार ल्याएकी छिन् । पुर्व पती छविराज ओझा र उनकी हुनेवाली कान्छी शिल्पा पोखरेललाई प्रिमियरको निम्ता दिएर रेखाले फराकिलो दिल देखाएकी छिन् । र, ‘रुद्रप्रिया’ पिमियरमा सहभागी भएर छवि र शिल्पाले रेखाको निम्ताको सम्मान गरेका छन् । यो सँगै रेखा, छवि र शिल्पा बिच सम्बन्धमा नयाँ ईंटा थपिएको विश्लेषण हुने थालेको छ ।
‘रिलेसनसिप’मा रहेका छवि र शिल्पाले त रेखाको फिल्मको मुक्तकण्ठले नै प्रशंसा गरे । जे होस् रेखा, छिव र शिल्पा बिच बिग्रिएको भनिएको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । अब के यो सम्बन्धले नयाँ मोड लेला ? के रेखा र शिल्पालाई एकै फिल्ममा देख्न सकिएला ? प्रिमियर पछि निर्माता ओझोले भने, नसकिने भन्ने कुरै छैन । हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध मात्रै सकिएको हो । व्यावसायिक सम्बन्ध बिग्रिएको छैन । उसो त सम्बन्ध विच्छेद पछि पनि छविले निर्माण गरेको फिल्म हमेशामा खेलेकी थिइन् भने रेखाले निर्माण गरेको काली प्रदर्शनको जिम्मा छविले नै लिएका थिए ।